Indlu yehlathi laseHygge
I-cottage ye-Hygge yindawo efanelekileyo yokuphumla kunye nekomityi ye-cocoa, iglasi yewayini elungileyo kwaye ihleli esikhumbeni kwindawo yomlilo evuthayo. Ehlotyeni, sikhetha ukuhlala kwizinyuko ezibanzi kwaye sibukele umlambo orhabaxa kanye ecaleni kwendlwana.
Ingaphakathi le cottage yayinothando. Ikhulu elinamashumi amahlanu eebhodi zemigangatho zongeza kumoya wamaxesha akudala Kwi-Hygge Cottage ungakonwabela obona buthongo bumnandi kwenye yeebhedi ezenziwe ngezandla ezilungileyo emhlabeni ezivela eHastens. Ukusuka kwi-Cedar barrel yokuhlamba nayo ilungele iindwendwe !!!
Hygge cottage yinxalenye yehlathi Hotel Kouty. Kukho izindlu ezi-6 ezivuselelwe ngovakalelo ehlathini. I-Hygge Cottage ikude kwezinye izindlu, ngoko iqinisekisa ubumfihlo. Kwangaxeshanye, iindwendwe zethu zinokusebenzisa izinto eziluncedo zehotele - ukubheqa, intenetya, ukukhwela isikhephe, ichibi elimangalisayo lokuqubha kunye nokubheqa. Kwaye kunye ne-sauna ekhethekileyo yomsedare. Ukuba unethamsanqa, ungonwabela eminye iminyhadala evela kwezona saunas zibalaseleyo kwiRiphabhliki yaseCzech.
Ngombulelo kwizibonelelo zehotele, kunokwenzeka ukuba ube nesidlo sakusasa esikhulu okanye sasemini.